Inobudirira Minyengetero YeKurooraKudzorerwa Mushure meUpombwe - Kunamata
yangu iphone haina hotspot
sei foni yangu isinga batane newifi yangu
iyo nhamba 4 inomiririrei mubhaibheri
Inobudirira Minyengetero Yekuroora Kuroora Mushure meUpombwe
Successful Prayers Marriage Restoration After Adultery
Minyengetero yekudzoreredza roorano mushure mehupombwe . Munamato wekusatendeka muwanano.
Nhasi, michato vari pasi pehukuru kurwisa . Kuroorana sakaramende iyo murume nemukadzi vakabatana; ndiko kutanga kwe mhuri . Izvi minamato ndeyekutenda, nekuti vakaroorana vari mumatambudziko , kukumbira a wanano inofadza . Ndinovimba vanokushandirai.
Ndeipi nguva yakanakisa yekunamatira roorano?
Minamato yekumisa upombwe ,Unogona kunamatira uyu munamato pese paunoda. Asi isu tinozvikurudzira (sekufunga kwedu), zviite mambakwedza. Jesu akamuka mangwanani-ngwanani akaenda kunonyengetera ari oga mugomo. Tora mukana wenguva iyoyo, mukunyarara kwemangwanani, uye namata nekuzvipira kuna Jehovha munamato wemichato .
Nyika pachezvayo inoda humbowo hwemichato ine hutano uye yakanaka, inoshuvira iwo mwenje.
Tinofanira kugadzira tsika inokoshesa muchato nemhuri ; aya mazwi anofanira kutaurwa nekuremekedza. Kuroora nemhuri isakaramende dzinoyera dzerudo rwakakosha rwaMwari rwepasi.
Saka zvabatanidzwa naMwari, ngaparege kuva nemunhu anoparadzanisa. (Mako 10.9-10)
Usambofa wakabvumira chero munhu kana chero chinhu kuti chikuparadzanise iwe nemumwe wako. Kunamatira roorano, kana zvichibvira, kunofanira kuitwa zuva nezuva, kukumbira dziviriro.
Munamato wevaya vakanetsana
Jesu, pano tiri, tese pamberi penyu, senge zuva riya ratakatambira sakaramende yemuchato. Kufanana nezuva iro, pawakaropafadza rudo rwedu. Asi ikozvino Jesu, takawisirwa pasi, takaoma, kure newe, tisina mvura yerudo rwako. Uye zvino kunakirwa kwedu kwaoma, dururira Mweya Mutsvene pamusoro pedu kuitira kuti utisuke, utisuke, utidzorere, uye utivandudze kuti rudo rwawakaropafadza rwuvezve.
Jesu, cheka usunungure zvese zvisungo zvezvivi, bvisa mweya wese wekusatendeka, famba kuburikidza nemhuri yedu, imba yedu, ropafadza vana vedu, komborera hupenyu hwedu. Ishe ndibvumidzei kuti ndive izvo murume / mukadzi wangu anoshuvira uye kuti / iye ndizvo zvandiri kuda. Ishe, dzorerai iro sakaramende rine simba rakatibatanidza. Sana, Jesu.
Jesu, dai Mhuri Dzvene yapinda mumba mangu, kuti tizive kurera vana vedu, nenzira yaMaria naJoseph, uye kuti vana vedu vave semi. Titumirei Mweya wenyu Mutsvene, kuti mutidzivirire. Ropa ropa rako rakakosha pawanano iyi, pamba, pamhuri, tifukidze nejasi rako. Ameni.
Ishe, tinodanana, tinodanana zvakanyanya, kunyangwe tichiziva kuti hapana chakanyatsozadzikiswa, asi rudo irworwo rwunovakwa zuva nezuva, nezvinyararire nemashoko uye pamusoro pezvose, nekutambirwa kukuru nekanganwiro.
Kana rudo rwedu rwuchikura, takakukokai kumuchato wedu. Yakanga yakanaka seKana. Sakaramende risingaperi rekuvapo kwako matiri raita kuti tizive muhupenyu hwedu hwekusangana kuti mvura yemaitiro edu inova waini itsva kana rudo rwedu
chipo chaicho uye kupa kana isu tichikanganwa zviri zvangu
uye isu isu kana iwe nekuvapo kwako tichinyatsoita nharaunda yeHupenyu nerudo. Ameni.
Kuva nemuchato wakanaka
Ishe: Gadzirai musha wedu nzvimbo yerudo rwenyu.
Ngapasava nekukuvara nekuti iwe unotipa kunzwisisa.
Ngapasava nekuvava nekuti Iwe unotiropafadza.
Ngapasave nehudyire nekuti Iwe unotikurudzira.
Ngapasave neanopusa nekuti Munotipa ruregerero.
Ngapasave nekusiiwa nekuti Iwe unesu.
Kuti isu tinoziva mafambiro tichienda kwaUri muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Rega mangwanani oga oga kwoedza rimwe zuva rekuzvipira uye rekubaira.
Kuti husiku hwega hwega tinowana rwakawanda rudo kubva kune vakaroora.
Ishe, gadzirai hupenyu hwedu kuti maida kujoina peji rizere neMi.
Itai, Ishe, zvevana vedu izvo zvamunoshuvira:
tibatsireiwo kuvadzidzisa nekuvatungamira munzira.
Isu tinoedza kuyanana.
Ngatiitei rudo chimwe chikonzero chekukuda zvakanyanya.
Dai taita nepatinogona napo kuti tifare pamba.
Kuti kana zuva guru rekusangana newe rasvika, unotipa kuti tizviwane takabatana nekusingaperi mauri.
Munamato uchipa kutenda kune muchato
Ishe, Baba Vatsvene, Samasimba uye Mwari wekusingaperi,
tinokutendai nekuropafadza zita renyu dzvene:
Makasika murume nemukadzi kuitira kuti mumwe ave mumwe
rubatsiro uye rutsigiro. Tirangarirei nhasi. Tidzivirire uye utipe
kuti rudo rwedu chipo nechipo, mumufananidzo waKristu neChechi.
Tijekeserei uye mutisimbise pabasa rekuumbwa kwevana vedu,
kuitira kuti ivo vaKristu vechokwadi uye vavaki ve
guta repasi. Tiite kuti tigare pamwe kwenguva yakareba, mumufaro nerunyararo,
kuitira kuti mwoyo yedu igare ichisimudzira kwauri kuburikidza neMwanakomana wako muMweya Mutsvene, kurumbidza, nekutenda. Ameni.
O Mwari, Baba vedu vekudenga, mutidzivirire uye mutiropafadze.
Inodzamisa nekusimbisa rudo rwedu zuva nezuva. Tipei netsitsi dzenyu kuti tirege kutaura mashoko akashata kune mumwe nemumwe.
Tikanganwirei uye gadzirisai zvatinokanganisa, uye tibatsirei kuti tigare tichizviregerera pachedu pese patinotadzira isu nekusaziva. Tichengete uye uchengete isu kuitira kuti tigare takagwinya, takangwarira mupfungwa, vane moyo munyoro, uye vanozvipira mumweya.
O Mwari, tipei isu kushuvira uye kupa uye kuve kugona kune mumwe nemumwe. Isu tinokumbirawo kuti muzadze hupenyu hwedu hwezuva nezuva nehunhu hwamunongogona kutipa chete. Uye saka, Ishe, tora rudo rwedu uye neupenyu hwedu pamwechete, kuti zvive kurumbidzwa kwamuri, kuti zviri kushandira vamwe.
Ngatigarei takabatana pamberi penyu, mumufaro nerunyararo nerubatsiro rwaKristu, Ishe wedu. Ameni.
Ishe, Baba Vatsvene,
Wemasimbaose uye Mwari wekusingaperi,
zita renyu dzvene: ndimi makasika
saka kuti imwe neimwe ndeyeimwe
kuti rudo rwedu ruve a
chipo uye chipo, mumufananidzo waKristu.
Tijekeserei uye mutisimbise mubasa
yekuumbwa kwevana vedu,
saka ivo maKristu echokwadi
uye vavaki ve
guta repasi. Tiitei kuti tirarame
pamwe chete kwenguva yakareba, mumufaro nerunyararo,
kuitira kuti mwoyo yedu
inogona kugara ichisimudza yakanangana newe,
kuburikidza neMwanakomana wako muMweya Mutsvene,
kurumbidza nekutenda. Ameni.
Namatai munamato wekuroora pamwechete.
Bvumiranai (kana zvichibvira) kuita munamato wekuroora pamwechete. Icho chiito cherudo chauchange uchiitira kune hukama hwako. Torai nguva yekunamata pamwe chete. Ngatiyeukei kuti, tichinamata pamwechete sevanhu vaviri, hapana chinokunda maropafadzo amuchagamuchira mumunamato wenyu.
Varume, nzwisisai kuti munofanira kugoverana Hupenyu hwenyu nechinhu chisina kusimba, senge mukadzi: mumubate neruremekedzo nekuda kwevagari venhaka yenyasha dzinopihwa neUpenyu. Nenzira iyi, hapana chichava chipinganidzo kumunamato. (1 Petro 3.7)
Mwari mumwe newe; Mwari rudo; muchato rudo . Rudo runotsungirira pane zvese zvinouya; hazvingagumi. [Verenga 1 VaKorinde 13.7-8]
Ngatitendei Mwari nechipo chemumwe wedu; isu tinodaidzwa kuve vamwe navo munguva uye nekusingaperi. Saka usarega kuita uyu munamato une simba kumichato; hauzombozvidembi nekuzviita. Ishe vakuropafadzei nekukuitirai wanano inoyera murudo.
Chipupuriro Chemuchato Kudzoreredza / Vieyra
Makore makumi maviri apfuura ndakaroora nekuti ndaive nepamuviri. Mwedzi mishoma zvisati zvaitika, murume wangu akapa mumwe mukadzi nhumbu. Akaita kuti hupenyu husakwanise kwatiri, kwemakore akatama ndokudzoka. Murume wangu akazvipira kunwa doro, kuenda kunofara. Ini ndaive ndakatsamwa nguva dzese, ndichinyunyuta kwaari kakawanda, ndichida kutiparadzanisa, iko kushora kwakauya, kushaikwa kwekuregerera, kunamatwa kwake.
Zvaigara zvakaita seizvi, hupenyu hwematare. Ini ndaida uye ndakatsvaga shoko raMwari munzvimbo zhinji, ini ndakatonyoresa mumapoka echechi, asi pandakasvika kumba zvaive zvakafanana, kurwa, kudada uye kusaregerera pamativi ese. Nekufamba kwenguva murume wangu anga asina kutendeka, ndainzwa kuti nyika yangu yave kupera, aida kutora hupenyu hwangu, ndakaedza kanoverengeka nemishonga uye nebanga. Akaita zvimwe chete kumurume wangu, pakasvika nguva yaakandirova, it was a very very difficult situation. Hupenyu hwangu hwaive maererano neni kuti nditambure uye nditambure. Ndakanga ndichisundira murume wangu zvakanyanya kubva padivi rangu mazuva ese. Tine vanasikana vatatu, vakuru vaviri vakatarisa zvese. Murume wangu akapota achiuya akadhakwa, zvainge zvakaoma.
Rimwe zuva ndakauya kuboka iri rakanaka kwavakandidzidzisa kuda Mwari. Kuti ndizvikoshe. Mwari ndiye mubatsiri wangu. Ndakaita zvidzidzo zvese zvavakatipa, ndakatanga kuteerera, kuvimba naMwari. Nhasi murume wangu nevanasikana vangu vanondiona zvakasiyana, vanondiudza kuti ndachinja zvakanyanya. Iye zvino murume wangu ari padhuze neni, anondimbundira achiti anodemba zvese zvatakasangana nazvo. Ndamuregerera nemoyo wese uye anoita kwandiri. Pane zvinhu zvichiri kuitika asi ndinoziva kuti Mwari vari kuzotidzorera tese zvizere. Ndinozviona uye ndinozvitenda nekuti zvakanyanya ndakatsvaga kugara murunyararo uye ndakazviwana kuna Mwari mukuru uye ane tsitsi. Iri kushanda mumhuri yangu. Izwi rake rinoti chema kwandiri uye ini ndichakupindura uye nekukudzidzisa zvinhu zvausingazive. Zvese zvinhu kubwinya kweMambo wedu mukuru weMadzimambo!
Izvo zvinongoramba zviri kwandiri kuti ndikuudze kuti isu tinoteerera nekuti ndizvo zvinodiwa naMwari wedu, kuti tinomuda, Iye chete. Ndatenda hanzvadzi diki nekuti ini ndadzidza zvakawanda kubva kune yega yega. Ndatenda Sr. Ana. Mwari vakukomborere.
Uchapupu hwemichato yakadzorerwa mushure mehupombwe
Uchapupu / Celest
Ini ndiri muKristu uye murume wangu haasati ari mutendi. Ndinokutaurira uchapupu hwangu nanhasi, gore rimwe nemwedzi mina mushure mekunge murume wangu abva pamba pedu:
Nezvikonzero zvebasa, murume wangu akaendeswa kunzvimbo yemukati yenyika uye semhuri takaenda tese. Ini ndakapedza makore mazhinji ekukwira nekudzika muwanano yangu, asi usambotya kusatendeka.
Rimwe zuva takaita hurukuro diki zvinova ndizvo zvakakonzera kuti zvese izvi zviitike. Murume wangu akandizvidza nekuda kwekusava nehanya naye, kuti ini ndinobatsira vamwe nekugadzirisa matambudziko avo kusara kwangu, chitendero changu, kuti rudo rwakafa, nezvimwe.
Mamiriro ezvinhu akati wandei, gare gare ndakazoona kuti ndakanga ndisina kutendeka.Ndakakwanisa kumuisa maoko angu pamoto, nekuti haana kumbobvira aratidzika kunge akadaro, asati ave nehunhu, akazvipira kumba kwake, chete kumhuri yake.
Akasangana nemunhu pabasa aiziva nzira yekubuda nayo pamba pake mumwedzi mitatu chete. Kuparara kwemuchato wangu kwaive kurova kwakanyanya kwandiri, kunyanya kana iwe uchifunga kuti iwe uri mukadzi akanakisa pasirese, kuti iwe waingofanirwa chete nezvinhu zvakanaka, kunze kwekubhadharwa seizvi. Zviroto zvako, zvishuwo zvako zvikuru, ramangwana rako rinongoratidzika serisina chinhu uye risina chokwadi.
Iwe unongoona kuora mwoyo, rima, kutambura, kurwadziwa kunowedzera zuva nezuva, zvakaipa zviri kuwedzera, kushungurudzwa, vana vedu vachitambura nezvimwe.
Asi ini ndaive nesarudzo mbiri: Yekutanga, ndakapasa bvunzo iyi munyika uye ndakazvirega ndichitorwa nemanzwiro angu (ruvengo, kuvava, kushushikana, kutsiva).
Kana ini ndaizopasa uyu muyedzo weruoko rwaMwari ndomurega achindirwira (Vimba, chengetedzo, Rutendo, Rudo, Tariro).
Ndatenda Mwari ndakaita sarudzo yakanakisa!
Saka ndakatanga rwendo rwangu mukutsvaga chokwadi, uye chakandisunungura !!
Mwari vakaisa vanachipangamazano kwandiri, ndakasiya shamwari dzangu, kunyarara, kunamata, kutsanya, kuchengeta maziso, ndakamisa imba yangu yehondo, uye Mwari vakanditendera kuti ndiwane iri boka rakakosha rinotungamirwa naSista Ana Nava. muzvirongwa zvavo, nekuti apa ndipo pandakadzidza uye ndikaziva kuti imba yangu yakanga isina hwaro hwakakodzera, nekuti Kristu aive asi ari kure nesu.
Kutenda kune ese marudziro Ekuroora Kuroora eboka iri: misimboti yeBhaibheri, minamato yepamusoro yemweya, minamato yekuporesa mweya, ndakadzidza kuti muvengi wangu chaiye anga asiri murume wangu uye kuti hupenzi hwangu nekunamata zvidhori kwakaputsa imba yangu.
Nekudaro, takabatana pamwe nezvipikirwa zvaMwari zvakanyorwa mushoko rake, neRutendo, Rudo, Tariro rega nditakurwe neMudiwa wangu uye zvino Anotora nzvimbo yake chaiyo muhupenyu hwangu.
Hosiya 2:14 Ndiri kuzoita kuti awire murudo Iye achamuendesa kurenje uye ini ndichataura kumoyo wake
Jesus, managed to captivate my heart now I know that with Him I have everything, I no longer look back, handichengete chigumbu murume wangu, ndakadzidza kumuregerera.
Mwari akaporesa moyo wangu uye ndinonamata kuti murume wangu uye mumwe munhu wacho asangane naMwari mumwe chete uyo anozadza hupenyu hwangu neMufaro nerunyararo zuva nezuva uye anokwanisa kuwana rusununguko, rudo uye kuregererwa muhupenyu hwavo.
Zvakabatanidzwa naMwari, munhu haagoni kuzviparadzanisa !!! Mateu 19: 6
Iri ibasa rinouya nekukurumidza pakuratidzwa nekuti izwi rake ndiHungu uye Ameni maAri !!!! Shoko rako ndiro vimbiso yangu !!!
Avo vanodyara nemisodzi vachakohwa nekufara Mapisarema 126: 5 Zvichava saizvozvo !!!
Pane chimwe chinhu chisingakwanisike kuna Mwari here?
Iye zvino ndinongovimba maAri, uye ndinoziva kuti mubairo uri padyo uye ndakaumirira, nekuti ndinoziva kuti Wangu Wandinoda anomhanyisa izwi rake kuti riite mukuita. Jeremia 1:12
Ndinokuropafadzai vadikani vangu uye ndinokurudzira kuti murambe muchishingirira.
Akazvitaura uye Achazviita !!!! He has spoken and will obey !!!!
Uchapupu hwekupodzwa kwemweya / Angela
Ndave ne 28 years ndaroora, 3 years ago murume wangu akabva pamba akanogara nemumwe mukadzi. Kufanana nesu tese tinopfuura nemamiriro ezvinhu aya, ini ndaida kufa; Ndakarwa, ndakaridza mhere, ndakachema, ndikataura, asi hapana chakashanda, murume wangu akatamira kure. Aive nemwanasikana nemumwe mukadzi uye akarasikirwa nehanya nemhuri yake.
Ini handizviriritire. Gore rekutanga uye netsitsi dzaMwari ndakakwanisa kurarama. Ndakasvika padanho rekupera mabasa ekutanga nekuda kwekushaikwa kwekubhadhara. Imba yangu yanga yoda kutsva uye kunyangwe ndisingazive Mwari, Vakandidzivirira. Murume wangu haana kuneta nekudzokorora kwandiri kuti aisandida uye kuti waaida kugara naye nekusingaperi aive mukadzi iyeye.
Kambani yangu chete ndiye aive mwanasikana wangu, nekuti vanakomana vangu vaviri mumwe nemumwe aive nemba yake. Murume wangu ndiye akanamatwa zvidhori, ndakakumbira rudo rwake uye ndikangogashira kurambwa. Pane imwe nguva ndakanga ndashandurwa kuva Kristu, ndakatanga kutarisa painternet kuti ndiwane rubatsiro rwekudzoreredza, ndakaverenga bhuku sekuda kwaMwari uye ari kuzodzoreredza roora rangu, ndakapindawo mushumiro uye zvishoma nezvishoma ndakachinja, kubva pakuva iye mukadzi uyo akashungurudza murume wangu nezvikumbiro izvozvi ini ndiri mukadzi asingadi. Ndino namatira iye neumwe mukadzi mazuva ese.
Ndinovimba muna Mwari kuti anoita basa rake rakakwana. Murume wangu haachandipopotera kuti haandide, zveshuwa haandiudze kuti anondida uye ini handibvunze futi, ndinongoramba ndichivimba naMwari vari kushanda mumoyo memurume wangu zvekare. Panguva ino akaita chimwe chinhu chaasina kuita kwenguva yakareba uye ichocho ndechekuti akanyora kundishuvira husiku hwakanaka uye uyu meseji akamuperekedza neichi.
Ini ndinoda ruzivo asi kwete sepakutanga, ikozvino zvanga zvasiyana. Ndinoziva kuti Mwari ari kubata nemurume wangu seniwo. Zvave zvakaoma kwazvo kubvuma kuti anogara nemumwe munhu, asi zvaive zvisingaite. Ndakadzidza kuzvidzora uye kwete kuzvidza. Ndakanzwisisa kuti murume wangu anofanira kuumbwa nekushandurwa obva adzoka kumba.
Uchapupu hwekuporeswa kwemweya / kusazivikanwa
Ndine gore muchiitiko ichi. Pakatanga izvozvo, zvese zvandakaita kutizira kuna Mwari; Munamato, kutsanya nekuverenga izwi. Ndakazviita nenzira yangu nekuti ndakanga ndisina gwara, kudzamara ndawana iri boka.
Kutevedzera kutungamira kwaSista Ana, mwedzi wakatevera ndakatenda Baba VANGU VEDENGA VEDenga nekuti ndine chokwadi chekuti Vakazvitendera nechinangwa cheupenyu hwangu uye neupenyu hwemurume wangu. Mushure memwedzi miviri ndakapa murume wangu chose mumaoko aMwari. Akange asisiri kusora paFacebook yake, akange asisiri kumirira kana aive online kana kwete. Nguva shomanana dzaakauya mumba, haana kukumbira chero chinhu, haana kubvunza chero chinhu.
Pandakave nechokwadi chekuti murume wangu aigara nemukadzi wechienzi, ndakatanga kumunamatirawo. Ndakabatirira zvakanyanya kuna Baba Vokudenga uye nezvivimbiso zvavo zvese zvekudzoreredza: Icho chiitiko apo zuva nezuva ini pandinoita sarudzo yekuregerera.
Kutenda kuzvidzidzo zvakapihwa muboka rino uye neminamato yatakadzidziswa nasisi Ana, moyo wangu wakasununguka kubva mukuvava. Hakuchina kuora mwoyo, kutsamwa, kutsamwa, godo.
Ndinotenda Mwari kuti handina kuwira mumusungo wevavengi wekuburitsa pachena matambudziko angu emuchato (rairo yaSista Ana) kune chero munhu asiri vamwe hanzvadzi vaive nhengo dzeboka iri vaifanira kuziva mamiriro angu kuti vandibatsire. Pese pandaiyedzwa kufonera murume wangu ndaipfugama pamberi paMwari ndozotaura kwaari.
Parizvino ndinoramba ndakabata ruoko rweWEDI WEDENGA, ndichivimba nezvakavimbiswa uye mukuda kwake kuri Kunaka uye kwakakwana. Izvo zvakanyorwa mushoko rake kuti izvo Mwari zvinobatanidza munhu hazviparadzanise. Ndinovimba naBaba vangu Vokudenga uye ndinoziva kuti zvakatorwa neruoko rwaVo, kubva kuzvidzidzo zvakapihwa muboka rino uye kuraira kwemutungamiriri waro nevamwe vatungamiriri, muchato wangu uchakurumidza kudzorerwa muzita raMasimbaose Jesu.
Kuroora Kudzoreredza Uchapupu / Vieyra
12 Minyengetero ine Simba YekuBreaking Fast & To Say Uchiri Kutsanya
Minyengetero Inoshanda Kuti Uhwinhe Iyo Rotari & Raki Rakanaka
Munamato weCancer Patient: Minyengetero yekurapa - Iva netariro
MIBVUNZO Inobudirira YOKUVARA Pasati & Pashure